सर्बोच्चको आदेश पछी रि’हा भएका ज्ञानेन्द्र शाही भन्छन- यो सबै नेपालीको जित हो ! – Everest Pati
सर्बोच्चको आदेश पछी रि’हा भएका ज्ञानेन्द्र शाही भन्छन- यो सबै नेपालीको जित हो !
काठमान्डौ , अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाही रि’हा भएका छन् । बिगत आठ दिन देखि प्रहरी हि’रासतमा रहेका शाही अदालतको फैसला संगै रि’हा भएका हुन् ।लकडाउन उल्लंघनको आरोपमा प्रहरीले ललितपुरकाे सुनाकोठीबाटबाट उनलाई मंगलबार पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेका ज्ञानेन्द्र भनिने ज्ञानबहादुर शाहीलाई २४ घन्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउन सर्वोच्च अदालतले आ’देश दिएको थियो । अधिवक्ता इन्द्रप्रसाद अर्यालले दा’यर गरेको ब’न्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा आइतवार सु’नुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको इ’जलासले पक्राउ गर्नुको आधार र कारणसहित ब’न्दी शाहीलाई उपस्थित गराउन आ’देश दिएको थियो ।
सोही नि’वेदनमा न्यायाधीशद्वय पुरुषाेत्तम भण्डारी र मनाेजकुमार शर्माकाे संयुक्त इ’जलासले उनलाई छा’ड्न आदेश दिएको हो। सर्वोच्च अदालत र महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले मा’तहतका कार्यालय तथा प्रहरीलाई मु’लुकी अ’पराध सं’हिता का’र्यविधि २०७४ को दफा १५ अनुसार ग’म्भीर किसिमका अ’पराधमा सं’लग्न अ’भियुक्तलाई पछि हाजिर गराउने गरी आफन्तको जिम्मा लगाउन निर्देशन दिएको थियो। नि’वेदकले उक्त निर्देशन तथा का’नुनी व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै शाहीलाई थु’नामै राखिएको दा’बी गरेपछि सर्वोच्चले कारण पे’श गर्न भनेको थियो।
आ’देशमा शाही र उनीसँगै पक्राउ परेका शक्तिराज शाहीलाई पनि पे’शका दिन उनीहरुवि’रुद्ध लागेको अ’भियोगको सक्कल फाइलसहित उपस्थित गराउन भनिएको थियो। शक्तिराज शाही पनि छुटेका छन्। न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र मनोजकुमार शर्माको इ’जलासले शाहीद्वयलाई छा’ड्ने आ’देश दिएको हो। रि’हा भएपछी पत्रकारहरु सँग छोटो कुराकानी गर्दै यो जित जनताको जित भएको र आगामी दिनमा कानुनको पा’लना गर्दै अगाडी बढ्ने बताएका छन् ।
कोरोनाका कारण लन्डनमा बाबुछोरी सुधिर र पुजाको निधन, मलामी जाने कोही भएनन्
काठमाडौंमा पनि भेटिए एक जना आरडिटी कोरोना पोजेटिभ !